Maxaa ka jira wararka sheegaya inay Liverpool si dhaqsi ah usoo qaadaneyso Naby Keita? Kooxdiisa ayaa ka jawaabtay! | Ciyaarside.com
Maxaa ka jira wararka sheegaya inay Liverpool si dhaqsi ah usoo qaadaneyso Naby Keita? Kooxdiisa ayaa ka jawaabtay!
Jan 3, 2018 - Aragtiyood
Joornaaliistaha aadka loogu ixtiraamo xanta kubadda cagta Spain iyo horyaalka La Liga Guillem Balague ayaa wuxuu maanta daaha ka qaaday inay Liverpool diyaar u tahay inay aqbasho dalabka ay Barcelona kasoo gudbin doonto Philippe Coutinho.
Maamulka kooxda Liverpool ayaa la filayaa inay dalab dhan 110 milyan oo euros oo kaash ah, ayna raacsan tahay 40 milyan oo ginni oo dheeraad ah ka helaan kooxda Barcelona si ay uga iibiyaan kubadsameeyaha reer Brazil Philippe Coutinho.
Guillem Balague wuxuu daaha ka qaaday inay Reds haatan jilicday oo aysan awoodin inay ciddiyaha ku dagaalanto si ay usiiceshato Philippe Coutinho, kaasoo shaqsiyan u doonaya ku biirista Camp Nou Stadium.
Sidaas darteed, kooxda ka dhisan Anfield Road ayaa bedelka Philippe Coutinho ka dhiganeysa Naby Keita, oo lagu ballansanaa inay dhammaadka xilli ciyaareedkaan kala soo wareegaan kooxda RB Leipzig, taasoo ay kala heshiiyeen saxiixa xiddigaan xagaagii lasoo dhaafay.
Lierpool ayaa 48 milyan oo ginni ku iibsatay xiddigaan, balse waxay diyaar u tahay inay qiimahaas sarre u qaado si xilli hore ay kooxda RB Leipzig u siiso Naby Keita, sida uu ku waramay joornaaliiste Guillem Balague.
Si kastaba ha ahaatee, waxay haatan arrintaasi u muuqataa mid aan dhici doonin, maadaama guddoomiayaha kooxda RB Leipzig ninka lagu magacaabo Oliver Mintzlaff uu daaha ka qaaday in aysan Liverpool la wareegi doonin Naby Keita waqti ka horreeya midkii lagu ballamay.
Sidaas darteed xiddiga reer Guinea ayaa ku biiri doona Liverpool xahaaha soo aadan. Wuxuuna Mintzlaff u sheegay majaladda Bild: “Midkoodna Naby ama wakiilkiisu inooma aysan soo gudbin codsi ah inuu ciyaaryahanku kooxda ka tago suuqa jiilaalka. Waxaa jira qandaraas aan galnay, kaasoo dhahaya, Naby wuxuu noqon doonaa shaqaale Liverpool ah laga bilaabo 1da bisha July”.
© 2018 Ciyaarside.com - All rights reserved.